Granada 1-4 Real Madrid, Los Blancos Oo La Wareegtay Hogaanka Horyaalka La-Liga
HomeWararka CiyaarahaGranada 1-4 Real Madrid, Los Blancos oo la wareegtay hogaanka Horyaalka La-Liga
November 22, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
kooxda Real Madrid ayaa qabatay hogaanka Horyaalka Spain kadib guul ay ka gaartay kooxda Granada.
Real Madrid ayaa 1-4 uga badisay kooxda Granada, Goolasha kulanka waxaa ka caawiyay xidigaha kala ah Marco Asensio, n fernandez, Vinícius Júnior iyo Ferland Mendy.
Marco Asensio ayaa daqiiqaddii 19aad hoggaanka u dhiibay Real Madrid kaddib markii uu dhamaystiray kubbad uu Toni Kroos u keenay, taas oo uu si fudud ugu hubsaday shabaqa isaga oo aan wax qalad ah samayn.
Real Madrid ayaa hoggaanka sii dheeraysatay daqiiqaddii 25aad, markaas oo uu Nacho goolka ku leexiyey kubbad koorne ahayd oo uu Toni Kroos usoo dhiibtay Luka Modric oo isaguna meel cidlo ah u dhigay, taas oo uu goolka hortiisa soo dhigay, isla markaana uu Nacho lugta geliyey.
Luis Suarez ayaa kooxda garoonkeeda joogtay ee Granada u keenay gool uu meel fog ka toogtay oo Nacho kusii dhacday, taas oo dhinaca kale u dirtay goolhayaha, sidaas ayaanay qaybta hore ugu dhmaatay 2-1.
Daqiiqaddii 56aad Karim ayaa kubbad kala soo galay badhtamaha, waxaana uu goolka hortiisa u dhigay Luka Modric oo isaguna usii dhiibay Vinicius Junior oo ciyaarta ka dhigay 3-1.
Ferland Mendy ayaa dhaliyey goolka afraad ee kooxdiisa, iyadoo dhamaadkiina ay Real Madrid ku doodday rikoodhe hase yeeshee lagu qanciyey inay kubaddu baxday ka hor intii aan qaladka lagu gelin Rodrygo oo beddel ku yimid.
Natiijo ahaan Real Madrid waxay yeelatay 30 dhibcood oo ay ka urursatay 13 ciyaarood oo horyaalka ah oo ay dheeshay, waxaanay laba dhibcood ka horreysaa Sevilla iyo Real Sociedad oo min 28 dhibcood haysta.
Real Madrid ayaa kulanka xiga la ciyaareysa kooxda FC Sheriff Champions league-ga Halka Granada ay booqaneyso Altico Bilbao.